Nyocha banyere mobiles, smartwatches, tablet, ngwa, ngwa, egwuregwu, ... | Gam akporosis
A na-atụle nyocha ma ọ bụ nyocha ahụ iji chọpụta ma ọ bụrụ na ngwaahịa dị ndụ na-atụ anya ma ọ bara uru ịzụta. N'ime otu a, anyị ga-ahụ nyocha dịgasị iche iche nke ngwaahịa, site na smartphones ma ọ bụ mbadamba na gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ yana ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ sitere na ụdị metụtara ụwa a dị ka igwefoto, ọkà okwu, ekweisi, ndị ọkà okwu mara mma ma ọ bụ smartwatches. Kindsdị ngwaahịa niile.
Ekele maka nyocha ndị a, ị ga-enwe ike ịma ma ọ bụrụ na enwere ngwaọrụ gam akporo nke nwere mmasị gị, ị ga-enwe ike ịmata ma ọ bara uru ịzụta. Na nke a Androidsis udi ị ga-ahụ nyocha kachasị mma na nke zuru oke. Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ngwaọrụ ndị a nwere ike ịchọta na otu a.
Dreame L10 Pro vacuum Cleaner, nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa
por Rafa Rodríguez Ballesteros eme 1 izu .
Oge a anyị na-abịa na nyocha na-adịghị ahụkebe na akụkụ ndị a. Na Androidsis anyị na-ewetara gị nyocha na-atọ ụtọ gbasara ...
Ọkà okwu ikuku ikuku Tronsmart Studio, nyocha, atụmatụ na ọnụahịa
por Rafa Rodríguez Ballesteros eme 4 izu .
Anyị na-alaghachi na Androidsis na nyocha na ụda na egwu dịka ezigbo ndị na-akwado ya. Nyocha nke ...
Mibro Lite, nyocha, ọnụahịa na nkọwapụta
por Rafa Rodríguez Ballesteros eme 1 ọnwa .
Anyị na -alaghachi na Androidsis na nyocha nke smartwatch sitere na ụlọ ọrụ anyị maara nke ọma. Onye otu ọhụrụ nke ...
por Miguel Hernandez eme Ọnwa 2 .
Realme na-aga n'ihu na-afanye ahịa telephony n'etiti etiti oge ya niile, ...
Ọ dị mma ịzụta n'aka Yaphone?
Ekele na ịntanetị, anyị nwere ike nweta ọtụtụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke na -enye anyị ohere ịtụle ọnụahịa nke ...
Xiaodu Du Smart Buds, nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa
por Rafa Rodríguez Ballesteros eme Ọnwa 2 .
Anyị na-agakwa n'ihu na-anwale ngwaahịa na-akwụsị akwụsị nke na-akwado ekwentị anyị. Ndị ihe ịrụ ụka adịghị ya bụ di na nwunye ...
Nyocha onyx Apex, kagbuo mkpọtụ kacha arụ ọrụ?
Na Androidsis anyị na -aga n'ihu na -anwale ụdị ngwa na ngwa niile maka ekwentị anyị. Ọzọ, anyị enweela ike ịnwale ụfọdụ ekweisi ...
SmartGaGa Nke a emulator gam akporo adịghị mma?
A bịa n'ikwu maka ndị na -e Androidomi gam akporo, anyị ga -ekwurịrị maka Bluestacks, otu n'ime ama ama….
Huawei FreeBuds 4, nhọrọ kachasị mma na ekweisi TWS mepere emepe [nyocha]
por Miguel Hernandez eme Ọnwa 3 .
Igwe isi ikuku TWS na -agbakwụnye n'ahịa, nke mere na ihe siri ike bụ ịchọta ...
Super EQ S1, nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa
por Rafa Rodríguez Ballesteros eme Ọnwa 3 .
Anyị na -eji nyocha na -alaghachi na nyocha ikuku ekweisi ikuku. Mana oge a anyị na -ewetara gị ihe nlereanya nwere usoro “karịrị…”.
Nyocha igwefoto nke Huawei P50 Pro, njedebe ọhụrụ nke ụlọ ọrụ [DxOMark Analysis]
por Aaron Rivas eme Ọnwa 3 .
Huawei P50 Pro bụ ugbu a ekwentị kachasị dị elu nke ika ahụ, bụrụkwa otu n'ime ndị kachasị elu ...
Nyochaa Xiaomi Mi Band 3
Nyochaa vidiyo tinyere see Energy Music BOX 5 + YALL Edition
Review nke Leagoo S8, a zuru ezu ọnụ n'ihi na ihe karịrị 100 euro
Unboxing + Nyocha + Ike ekwentị Pro 3 Onyinye Efu (Enyemaka Mba Nile)
Ezigbo ngwa nhichapụ gam akporo nke ga-eju gị anya
LeEco LETV S3, nyocha na uche
Ulefone Gemini Pro Nyochaa
Nyocha miri emi nke Nokia 3
Chuwi Hi10 Pro, nyocha na uche
Nyocha miri emi nke BQ Aquaris X
Ngwọta Samsung Galaxy S6 Edge Plus batrị nsogbu
Moto Z Play, nyocha na echiche
Meizu M5, nyocha na uche